Kpido: akara aha » Martech Zone
Ịgụ Oge: 3 nkeji Ndị na-ahazi na-eji faịlụ vector ndị nwere ikike ma dị site na saịtị foto ngwaahịa. Ihe ịma aka a na-abịa mgbe ha chọrọ imelite nkwenye ndị ọzọ n'ime nzukọ iji kwekọọ styling na branding metụtara na mbụ wepụtara iconography ma ọ bụ akara. N'oge ụfọdụ, nke a nwere ike ịbụ n'ihi ntụgharị yana… oge ụfọdụ ndị nrụpụta ọhụụ ma ọ bụ ndị ọrụ n'ụlọnga na-eweghara ọdịnaya na mbọ imewe na nzukọ. Nke a mere na nso nso a ka anyị were ọrụ
Sunday, Jenụwarị 6, 2019 Thursday, May 7, 2020 Douglas Karr
Ịgụ Oge: 2 nkeji Otu ebe m na-etinyeghị ego na ntinye aha ya bụ saịtị a. Ezie na m gị n'ụlọnga nwere oké logo na m hụrụ n'anya, na anyị na-arụ ọrụ niile nke ndị ahịa anyị na ha mbọn, M nnọọ enweghị bandwit na-arụ ọrụ na Martech Zone ika… ruo taa. Ihe ochie "M" bụ isi ihe atụ gbanwere ntakịrị nke m zụtara na ngwa ngwa mgbe m gbanwere ngalaba ahụ. Ọ bụ ihe doro anya, ọ naghị anọchite anya ihe ọ bụla, na
Ịgụ Oge: 3 nkeji Ndị enyi m hụrụ m n'anya na-enye m oge siri ike n'ihi ịbụ onye Apple fanboy. Enwere m ike iji obi eziokwu dọọ ya niile na ezigbo enyi, Bill Dawson, onye zụtara m ngwa Apple mbụ m - AppleTV… wee soro m rụọ ọrụ na ụlọ ọrụ ebe anyị bụ ndị njikwa ngwaahịa mbụ iji MacBook Pros. Abụwo m onye ofufe kemgbe ahụ na ugbu a, na mpụga nke Homepod na Ọdụ ụgbọ elu, enwere m ngwaọrụ ọ bụla.
Iwuli akwukwo ihe omuma: Atụmatụ 7 chọrọ ka azụmahịa gị dabere
Ịgụ Oge: 3 nkeji Ihe dị ka otu ọnwa gara aga, agara m sonye na nzukọ ịzụ ahịa ahịa maka onye ahịa. Ọ dị mma, na-arụ ọrụ na ndụmọdụ a maara maka ịmepụta ụzọ maka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ dị elu. Ka e mepụtara ụzọ ahụ, ụzọ ndị pụrụ iche na ndịiche dị iche iche ndị otu ahụ bịara masịrị m. Otú ọ dị, ekpebisikwara m ike ịhapụ ndị otu ahụ n'ahịa a lekwasịrị anya. Innovation bu atumatu di oke nkpa na otutu ulo oru taa, ma
Fraịdee, June 1, 2018 Tara Kelly
Ịgụ Oge: 3 nkeji Alexa, olu olu nke onwe nke Amazon, nwere ike ịchụ ihe karịrị ijeri $ 10 na ego ha ga enweta n'ime afọ ole na ole. Na mbido Jenụwarị, Google kwuru na ọ reela ihe karịrị nde Google Home Ngwaọrụ kemgbe etiti Ọktọba. Enyemaka bots dị ka Alexa na Hey Google na-aghọ ihe dị mkpa nke ndụ nke oge a, nke ahụ na-enyekwa ohere dị ịtụnanya maka ụdị iji jikọta ndị ahịa na ikpo okwu ọhụrụ. N'ịchọ ịnakwere ohere ahụ, ụdị na-agba ọsọ